सुरक्षा गार्डले १२ घण्टासम्म खटिदा पनि न्युनतम तलब पाएका छैनन् ! « News24 : Premium News Channel
सुरक्षा गार्डले १२ घण्टासम्म खटिदा पनि न्युनतम तलब पाएका छैनन् !
काठमाडौं । सरकरले श्रमिकको न्युनतम पारीश्रमिक १३ हजार ४ सय ५० पु¥याएपनि अधिकांश क्षेत्रका श्रमिकले भने सरकारले तोकेको पारीश्रमिक नपाएको गुनासो गरेका छन् । अधिकांश निजी क्षेत्रको सुरक्षार्थ खटिएका सुरक्षा गार्डले १२ घण्टा काममा खटिदाँ समेत न्युनतम पारीश्रमिक पाएका छैनन् ।
सरकारले सातामा ६ दिन ८ घण्टा काम गर्ने श्रमिकले आधारभुत पारीश्रमिक र महङ्गी भत्ता गरी न्युनतम १३ हजार ४ सय ५० तोकेको थियो । सरकारले यस बाहेक शनिबार तथा अतिरिक्त समयको स्केलको १.५ का दरले पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर अहिले यो तलब माग्दा अधिकांश सेक्युरेटी र्गाडले जागिर गुमाएका छन् ।
उपत्यकामा सञ्चालित १ सय ५ ओटा सेक्युरेडी गार्ड कम्पनीमा करीब २ लाख सेक्युरेटी गार्ड कार्यरत रहेका छन् । तर कुनै पनि सेक्युरेटी कम्पनीले न्युनतम पारीश्रमिक, शनिबार ओभर टाइम केही पनि कार्यान्वयन गरेका छैनन् ।
उनीहरुले श्रम कार्यालय, श्रम मन्त्रालय, श्रम अदालतमा उजुरी गर्दा कम्पनीलाई उपस्थीत हुन, कार्यान्वयन गर्न पत्रचार गर्ने तर कम्पनीले कार्यान्वयनको साटो अनेक बहाना बनाएर जागिरबाट निकालिदिने गरेको छ ।
सेक्युरेटी गार्ड अलवा अधिकांश उद्योग तथा कलाकारखानामा नेपाल सरकार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले २०७१ साउन १ गतेबाट लागु हुने गरी जारी गरेको न्युनतम पारीश्रमिक लागु भएको छैन । तर यसको अनुगमन र कारवाहीमा सरकारी पक्ष उदासिन देखिन्छन् ।
के पितृ साँच्चै रिसाउँछन् ? प्रियजनको जीवन मात्र हैन मरण पनि राम्रो हुनुपर्छ
नारायण नेपाल काडमाडाैं । शतबीज छर्ने दिनको अघिल्लो दिन चतरा -२ सुनसरीका पद्मप्रसादलाई भ्याई नभ्याई थियो
बैतडी : मेला हेर्न गएका व्यक्ति मृत फेला, हत्याको आशङ्का
बैतडी । मेला हेर्न गएका बैतडीको सिगासका एक व्यक्ति आज मृतावस्थामा फेला परेका छन् ।
झापाको बिर्तामोडमा ट्रकको ठक्करबाट मोटरसाइकल चालकको मृत्यु
झापा । झापाको बिर्तामोड नगरपालिकामा आज ट्रकको ठक्करबाट मोटरसाइलक चालकको मृत्यु भएको छ भने एक
अझै गति लिएन छाङ्गरु-तिङ्कर जोड्ने घोरेटो निर्माणले
सुनको मूल्य घट्यो, चाँदीको मूल्य स्थिर
‘केही महिना मै स्थानीय र एक वर्षपछि प्रदेश निर्वाचन हुँदैछ, तयारीमा लाग्नु’ – सभापति देउवा
युक्रनेको बिषयमा अमेरिका र रुसबीच तनाव बढ्दै
प्रधानन्यायाधीश जबरा अस्पतालबाट डिस्चार्ज